I-LIZ PHAIR: ISANDI-SEGIRLY-ISANDI EGUYVILLE: IBHOKISI YE-25 YE-ANNIVERS BOX SETHA UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
Isandi seGirly ukuya eGuyville: Ibhokisi ye-25 ye-Anniversary Box Set
I-albhamu ka-Liz Phair engacimekiyo, ebalulekileyo ikhutshiwe kwakhona kunye neetheyiphu ezintathu zokulala ezibalulekileyo ezichaza ngokubhala ingoma entsha kunye nokungaziqondi kwasekuqaleni kobomi bakhe.
Ukuba nawe, njengam, ubungumbophele kwaye ukhangela eneminyaka eli-13 ubudala xa uMatador wayekhululwa okokuqala Ukugxothwa eGuyville , ke mhlawumbi nawe, uyithathe njengengcwele yobutsha bakho. Ngoku, kwiminyaka engama-25 kamva, Ukugxothwa luhlala luhlobo lwekhowudi engcwalisiweyo yamantombazana: imephu esalatha ebudaleni, okanye into efana nayo.
UPhair waqala ukwenza umculo ngo-1991. Wayesandul 'ukugqiba izifundo zakhe kwiKholeji yase-Oberlin kwaye wayebuyile kumhlaba onamagqabi, osisityebi waseChicago, apho wayeza kuba neminyaka elishumi ngaphambili. Ukubuyela endlwini yabazali bakhe, wabhala kwaye warekhoda iikhasethi ezintathu zomchazi, elangazelela ilitye le-indie angazange alindele ukuba omnye umntu eve okanye anikele ingqalelo kulo. Ekugqibeleni, ezo teyiphu zathiywa igama kwaye zadluliselwa ngabahlobo abambalwa awayesabelana nabo-ngeetharikhi ezinqabileyo ezazitshintshiselana phakathi kwabo banelungelo. Khawufane ucinge into ekumele ukuba uzive ngathi kukuxinana emotweni yakho stereo ehlotyeni, ukuva ilizwi elicocekileyo kwaye lithukuthele livula isini sothando, uthando, ukwaliwa, kunye nokuba kuthetha ntoni ukufuna ngaphezulu koku.
Emva phayaa, uPair wayezibiza ngokuba yiGirly-Sound. Isibizo ngokwaso siziva njengesitshixo kuhlobo oluthile lukaPhair lobufazi. Endaweni yokuzama ukudlula phakathi kweeprojkthi ezixineneyo, ezizimeleyo zommandla waseChick Wicker Park — indawo awayeyibiza ngokuba yiGuyville — bobabini babanga kwaye bakhala ngobuntombi bakhe, kwanaxa kwakufuneka avume ubuthathaka obucacileyo.
Ezo teyiphu zintathu— Yo Yo Buddy Yup Yup iLizwi kuYuthuh , Amantombazana! Amantombazana! Amantombazana! , kunye Isoso , Eziye zaqokelelwa zaza zalungiswa kakuhle ukuze zifakwe kolu phindo-ziqulathe umculo omncinci wokuzithemba endakha ndeva. Ezinye zezinto ezinokubangelwa kukusondelelana kwendawo ayikhethileyo yokurekhoda-nabani na owakhe wanyathela phezulu, wakhupha idayari phantsi komatrasi, kwaye waqalisa ukubhengeza isibhengezo esibuhlungu kuyo esiqonda ubungcwele obunzima beemvakalelo kwigumbi lokulala elisemaphandleni. Kodwa uPhair wayenokuthetha phandle okungaqhelekanga, kunye nemithambo-luvo yokutshatisa. I-indie ethos yama-90s okuqala yayicingelwa malunga nokunyaniseka kunye nokuthembeka, kodwa yayihlala ibonakaliswa njengohlobo lwayo lwentsebenzo ye-neurotic-umxube ohlukanisayo wokungakhathali nobushushu obungafunyanwanga. I-Phair ibonakala ngathi, ngendlela yayo, iyanyangeka ngokupheleleyo kwi-bullshit yayo. Uthethe nje indlela aziva ngayo, ngaphandle kothethathethwano.
Oko akutsho ukuba akazange ahlupheke kwimeko. Abahlekisi baseGuyville, ngokungakhathali kwabo kunye nokungakhathali, bayaziphilisa ezi ngoma, bengoyiki kwaye bemkhathaza. Ufuna iziphumo: Nantoni na eyenzekileyo kumfana athandana naye? Uhlobo luni lomntu ozama ukuphumelela? uyazibuza kwivesi yokuqala yeFuck kunye nokuSebenza, awayeyirekhodela yona ekuqaleni Amantombazana! Amantombazana! Amantombazana! . Ukunganyaniseki kwakhe kwi-chorus-Ndifuna umfana / Ndifuna yonke into ebubudenge endala / Njengonobumba kunye neesodas-yayityhileke kakhulu kum njengomntu ofikisayo. Ndandingazi ukuba abantu bangathi olu hlobo lwezinto ngokuvakalayo. Yeyiphi into ekhaliphileyo nenesidima, ukunyaniseka malunga nento owawuyilangazelela! Ndisacinga ukuba indlala ngokwayo sisono. Abafazi endibathandayo- uKim Gordon, uKathleen Hanna, uPJ Harvey —baziva betyhafile ngenxa yokuba babebonakala bengeyomfuneko. UPhair wayeneminqweno, kwaye ezinye zazo zazineentloni, kwaye wayecula ngazo.
Kwenye indawo apha endleleni, uPhair wayenombono wokumodareyitha Ukugxothwa eGuyville emva kweRolling Stones ’ Ukugxothelwa kwisitalato esikhulu , nangona imbeko yayo yayiyeyona ithiyori kunokuba icace gca. Wayephendula, ekuqaleni, kwimibono engacacanga kodwa ebalulekileyo yamatye njengoluhlobo lwendoda eyomeleleyo kunye ne-hegemony ye-canon yamatye ngokubanzi. Ukuba ebengayivanga ngokwenyani le rekhodi ngaphambi kokuba aqale ukuzenzela eyakhe kuphela kubonakala kusasazeka okungaqhelekanga kwezi zimvo: Ukuba ujinga ngeenxa zonke, uKeith noJagger babesemoyeni. Ukubaluleka kwazo kwakuphantse kungomculo.
I-albhamu ayisiyongoma-ngengoma yokuphendula, njengoko ngamanye amaxesha ibibekwa. Kuyinto entle njengamatye, kwaye, ngamaxesha, ithenda enganyamezelekiyo. Kodwa ikwayinto ehlekisayo kunayo nayiphi na into eyenziwa ngamatye, kunye nokuzithoba okungapheliyo. Ingoma yoQhawulo-mtshato, i-jangly, evuthayo yejita yohambo malunga nohambo lwendlela olujika lube yintlekele, uziva ngathi ngumdlalo bhanyabhanya omncinci wasekhaya: Kwaye kuyinyani ukuba ndibile ukukhanya kwakho / Kwaye kuyinyani ukuba ndilahlekelwe yimephu / Kodwa xa uthe bekungafanelekanga ukuba uthethe / kuye kwafuneka ndithathe ilizwi lakho kuloo nto, uPhair uyacula. Ngubani ongenayo enye yezo ngxabano kunye neqabane okanye umthandi, apho into eyake yaziva ingenakonakala iqala ukuwa, kuphela kusenokwenzeka ukuba kufuneka uhlolisise i-motel kunye naloo mntu kwaye udle ama-pancake ngaphaya kwabo? Le yindawo emnandi kaPhair njengombalisi, ebona kwaye ebalisa ngokwenyani, ukuthengiselana nge-oafish phakathi kwabantu abangafezekanga, onke amaxesha amabi esiwaziyo kodwa singenakukwazi ukuwachaza.
Nangona wayeza kuphinda aluhlolisise uluhlu lwakhe ngokupheleleyo, ngo-1993, uPhair wayecula kuphela ngelizwi eliphantsi, eline-monotone elaziva lisondele kwaye livuma. Wayezifundise indlela yokudlala isiginci, kwaye ngenxa yokuba wayengafundiswanga kuwo onke amanyathelo asisiseko, ngokungazi waqulunqa uhlobo lwayo lwesitayile se-scrappy kunye ne-idiosyncratic. Akazange abonakale enomdla ngakumbi kwi-persona, evumela abalandeli bakhe ukuba bakholelwe ukuba bayangeniswa kuhlobo oluthile lwemfihlo. Ukumamela Ukugxothwa eGuyville Uziva ngale ndlela: Njengomntu okuxelela ukuba zonke izinto ezothusayo, ezingonwabisiyo ocinga nokuzikhathaza ngazo, luloyiko nje oluqhelekileyo. Ezo mvakalelo, kuyacaca ukuba, ziyindlela nje yokuphila.
UCalvin harris funk wav bounce
Inkqubo yezandi ye-lcd-iphupha laseMelika
Ixesha elizayo kunye nedrake ukhenketho ngo-2016
Lo ngumdumba wenyanga kaSeptemba
ji inkosana york york